Fred Rwigyema - Wikipedia
I Fred Gisa Rwigema dia mpanao pôlitika roandey, isan'ireo mpanorina ny antoko Front patriotique rwandais (FPR) sady heverina ho olomanga teo amin'ny tantaran'i Roanda na dia tsy niaina tao Roanda aza izy nandritra ny ankabeazan'ny androm-piainany. Teraka tamin'ny 10 Avrily 1957 tao Gitarama izy ary maty tamin'ny 2 Ôktôbra 1990. Emmanuel Gisa no tena anarany.
I Rwigema dia teraka tao amin'ny faritra atsimo ao Roanda. Satria izy heverina ho ao amin'ny foko totsy dia nandosirta tany Oganda miaraka amin'ny fianakaviany nankany amin'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana Nshungerezi ao Ankole tamin'ny taona 1960, taorian'ny fiovam-penitra mahery vaika hoto (revôlisiona hoto) tamin'ny taona 1959 sy ny fiakaran'i Dominique Mbonyumutwa piraiminisitra teo amin'ny fitonfdrana.
Rehefa nifarana ny fianarany tamin'ny taona 1976 dia nankany Tanzania izy ka niditra tao amin'ny Front de libération National, izay vondrona mpioko notarihin'i Yoweri Museveni. Tamin'izany fotoana izany no nanovany ny anarany hoe Fred Rwigema. Tamin'io taona 1976 io ihany dia nankany Môzambika izy ka ninditra tao amin'ireo mpioko izay nitolona hanafaka an'io firenena io amin'ny fibodoana ataon'ny mpanjana-tany pôrtogey.
Tamin'ny taona 1979 i Fred Rwigema dia niditra tao amin'ny Armée Nationale de Libération de l’Ouganda izay nandresy ka naka an'i Kampala tamin'ny volana Avrily sy nanery an'i Idi Amin Dada hisesitany. Taty aoriana izy dia niditra tao amin'ny Armée nationale de résistance izay niady amim-piadiana tamin'ny governemantan'i Milton Obote.
Tamin'ny taona 1990 izy dia nitarika ny Front patriotique rwandais, izay nanafika an'i Roanda tamin'ny 1 Ôktôbra avy ao Oganda, ka izany no fanombohan'ny ady an-trano tao Roanda. Roa andro taorian'io fanafihana io izy dia maty tamin'ny fomba tsy fantatra mazava.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fred_Rwigyema&oldid=996836"
Voaova farany tamin'ny 8 Septambra 2020 amin'ny 09:29 ity pejy ity.